धेरै देशहरूमा इस्लाम फैलाउने संग मुसलमान नाम प्रयोग गर्न थाले। समय, आफ्नो आवाज परिवर्तन भएको छ, तर मूल्य नै रह्यो। यो नाम प्रयोग गरिएको छ जो देश को भाषा को फोनेटिक सुविधाहरू कारण हो। यो पूर्व को इतिहास प्रतिबिम्बित किनभने इस्लाम मा नाम Iskander को अर्थ, पर्याप्त प्रसिद्ध छ, तर यो आफ्नो मालिक राम्रो भाग्य ल्याउन हुनेछ कि? त्यसैले, के विशेषताहरु भाषाविद् यो एउटा नाम दिन र आफ्नो क्यारियर के भाग्य पर्खिरहेको।
नाम को मूल र अर्थ
Iskander - को नाम तातार मूल। Arabized फारम यो अलेक्जेन्डर जस्तै सुनिन्छ। त्यहाँ एउटा नाम धन्यवाद थियो Aleksandru Makedonskomu, Iskander Zulkarnayn मुस्लिम भनिन्थ्यो जो। केन्द्रीय इराक यो ठूलो कमान्डर को सम्मान मा पनि एल Iskandriya को नाम संग व्यञ्जनवर्ण नाम जन्माई जो शहर, बनाए। मिति, Iskander - सबै भन्दा व्यापक मुसलमान देशहरूमा प्रयोग, यो व्यावहारिक रूस मा उत्पन्न गर्दैन को नाम। रूसी अनुवाद, यो नाम अलेक्जेन्डर रूपमा एउटै अर्थ छ, र एक "विजेता", जस्तै सुनिन्छ "रक्षक।"
नाम Iskander को अर्थ प्रारम्भिक बाल्यकाल देखा। केटा शान्त र उचित बढ्छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद उनीहरूसँग आमाबाबुले यसलाई बलियो-इरादों अक्षर छन् र सबै आफ्नै राय छ, किनभने एकदम गाह्रो छ। केटा उहाँले धेरै साथीहरू छन्, अविश्वसनीय खाजिनिति गर्ने र मिलनसार छ, तर आफ्नो प्रभाव अन्तर्गत उहाँले व्यक्तित्व लक्ष्य हासिल गर्न रुचि गर्छन, अरू को स्वतन्त्र गठन किनभने सम्झना गर्छन कहिल्यै। नाम Iskander बच्चाको शिक्षा प्रतिबिम्बित को अर्थ। केटा धेरै राम्रो सिक्छन्, र सबै को सबै भन्दा उहाँले ती कुराहरू गाह्रो हो कि रुचि। यो जीत हुनुपर्छ जो शीर्ष तिनीहरूलाई तुलना र सधैं उनको बाटो हुन्छ।
आफ्नो स्वास्थ्य हेरविचार Iskander बाल्यकाल देखि बारेमा। चिसो फसाउन डर, उहाँले बाहिर खुर्सानी मौसम मा एक टोपी बिना puddles मा अन्य बच्चाहरु संग हाम फाल्न छैन जान्छ कहिल्यै। पुरानो हुँदा उहाँले जसबाट थप प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो, खेल मा संलग्न सुरु गर्न खुसी थियो।
Iskander: नाम को मान, वर्ण
वयस्क Iskander - संवेदनशील, दयालु र उज्ज्वल व्यक्ति, तर उहाँले व्यावहारिकता को कूटवेश अन्तर्गत अरूबाट लुकाउन प्रयास यी गुणहरू। सिद्धान्त, यो व्यावहारिक र केवल नजिक मानिसहरूले यसलाई साँच्चै के थाहा गर्न सम्भव छ। को Iskander जीवन कुनै पनि अन्य व्यक्ति जस्तै, त्यहाँ माथि र तल छन्, तर असफलता मात्र आफ्नो चरित्र कठोर। उहाँले अन्त मा, यो लक्ष्य हासिल गर्न भनेर काम एक मा थप, सुरू हुने, साहसी भई तिनीहरूलाई स्थान्तरण। Iskander ठूलो महत्त्व विद्यमान सामाजिक नियम र मान्यता पनि गर्न संलग्न गर्दछ। उहाँले पनि विचार मा अवैध केहि गर्न सक्छन् नगर्ने अविश्वसनीय व्यवस्था-पालन मान्छे, छ। अक्सर, न्याय समर्थन गर्न प्रयास, Iskander विवाद मा, प्रविष्ट परिणामस्वरूप केही यसलाई scandalous व्यक्ति विचार मा। यो बावजुद एकदम तरिकाले उसलाई कुरा। Iskander सधैं interlocutor समर्थन र दुवै गर्न चासो भनेर कुराकानी को एक विषय पत्ता लगाउन सक्षम।
नाम Iskander गठन क्यारियर मा प्रकट को अर्थ। कारण जिम्मेवारी र प्रतिबद्धता गर्न, उहाँले सजिलै नयाँ हाइट्स जित्छ र तेजी देखि क्यारियर सीढी अप सार्दा छ। लगनशील भई लागिरहेमा, विकास तार्किक सोच, उहाँले चिकित्सा पेशा, इन्जिनियर, भौतिक, प्रोग्रामर, शिक्षक, डिजाइनर छनोट यदि सानो विवरण, उहाँलाई उपयोगी हुनेछ पनि नोटिस गर्ने क्षमता। साथै, Iskander पूजाहारी वा शैक्षिक बन्न सक्छ।
Iskander वस्तुतः कुनै प्रभाव नाम एक जीवन साथी मान छान्ने। बलियो, जीवंत सक्रिय र आत्म-पर्याप्त महिला - नियम, पारिवारिक सम्बन्ध नेतृत्व हाम्रो नायक पत्नी पहुंचाता। Iskander अविश्वसनीय धेरै त सबै "पुरुष" र मा घरेलू घरधन्दा साझेदारी छैन, आफ्नो पत्नी मदत भन्दा, आराम कदर "महिला।" आफ्नो घर भलाइ र भविष्यको लागि आशा को एक विशेष वातावरण, स्वच्छ र राम्रो सधैं छ। आफ्नो बच्चाहरु संग Iskander धेरै प्रकारको, सधैं तिनीहरूलाई समय दिन र हेरविचार सरसंगत गर्ने प्रयास। तिनीहरूलाई उहाँले तिनीहरू मात्र होइन एक पिता तर पनि सबै भन्दा राम्रो मित्र बन्न एक यस्तो तरिका निर्माण गर्न प्रयास गरिरहेको छ।
को राशि को संकेत उपयुक्त
यो नाम वृष वा कुंभ चिन्ह अन्तर्गत जन्म भएको थियो जो केटा, दिन राम्रो छ। पहिलो Iskander विश्वसनीयता, नम्रता, व्यावहारिकता एकतामा बाँध्ने संग, त्यसैले यो नाम मात्र वृष सकारात्मक गुणहरू बलियो हुनेछ। साधारण जिज्ञासा मा कुंभ Iskander संग, जीवन एउटा गम्भीर मनोवृत्ति राम्रो-विकास अंतर्ज्ञान। यो पोषण साइन अरूलाई लाभ उठाउन र उहाँको महिमा गर्न निश्चित हो कि कुराहरूमा Iskander बाध्य गर्नु सक्नुहुन्छ।
अन्य नाम अनुकूलता
राम्रो सम्बन्ध Iskander सोफिया, लारिसा, ओल्गा, ओक्साना, भिक्टोरिया, Lyudmila, क्याथरीन हुनेछ।
Quarrels, गलत अर्थ Elena, Taisia, आशा, Daria संग एक जोडी मा सम्भव छ।
Rune रड Slavs
तुलसी को नाम। होल्डरलाई को भाग्य मा मूल्य
सेतो भाइचाराको शिक्षा। रूस मा सेतो ब्रदरहुड
Chivyrkuisky खाडी: नक्सा, फोटो, पर्यटक केन्द्र
Teething समयमा पखाला - सामान्य वा आतंक कारण?
तरवार को ऐस (Taro): अर्थ र व्याख्या नक्शा
"Gyulchataj" एक लोकप्रिय रूसी टिभी श्रृंखला। अभिनेता र भूमिकाको
नियम र परम्परा: व्हिस्की कसरी पिउन
मोडेम डी-लिङ्क डीएसएल-2640U: सिंहावलोकन, विनिर्देशों, वर्णन र समीक्षा
टमाटर बीफ: वर्णन, विशेषताहरु। सलाद र रस लागि ठूलो fleshy टमाटर
घरमा Zheltobryuhaya सर्प: को पिंजरे र सामग्रीको व्यवस्था सुझावहरूको
यूएस देशहरूमा - एकतामा बाटो